Caalamka Akhriska – Cabdicasiis Guudcadde
July 6, 2016 July 26, 2016 Guudcadde
Buugyarahan Caalamka Akhriska waxa uu ahaa dhurta ka dhalatay qoraallo taxane ahaa oo qoruhu uu ku fidinayay baraha bulshada bishii Ramadaan ee 1437. Qoraalladaa waxa looga dan lahaa si loo jeclaysiiyo Soomaalida, oo marfashyada ay ka sheekeeyaan loogu soo daro, wax-akhriska. Marka jeclaysiintaasi guulaysato, waxa uu qoraalku naawilayay in la dhiso xidhiidh adag oo ruuxa Soomaaliga ah iyo buugga ka dhex bilaabma. Xidhiidhkaa oo midhihiisa la gurto.
Waxa aynu u kala qaybinaynaa buugyaraheennan afar geeddi. Bilawgaba waxa aynu ku furfuranaynaa micnaynta akhrisku waxa uu yahay iyo taariikhdiisa oo aad u kooban. Waxa aynu dabadeedna ku xigsiin doonnaa sharraxidda mudnaanta uu akhrisku u leeyahay akhristaha, cidda aan wax akhrinna uu kala maqan yahay. Waxa aynu qaybtan ku eegi doonnaa waxa akhriska siiyay qiimaha uu leeyahay maanta. Waa waxa keenay in aynu wax ka qorno; maxaa aynu ku aragnay akhriska! Muhiimaddan aynu sheegi doonnaa ma aha mid u gaar ah dadka qaangaadhka ah, ama jinsi gooni ah, waa mudnaan LOO DHAN YAHAY, oo saamayntiisa ay arkaan yar iyo weynba. Waxa inoogu xigi doona qayb aynu ugu talagalnay in aynu ku faahfaahinno midhaha uu goosto qofka akhriska la dersaa. Waa natiijada rasmiga ah ee uu u hadho ruuxa markiisii hore wehelka ka dhigtay dhigaalku. Markan waxa aynu u gudbaynaa qaybta u danbaysa, oo malahayga u muhiimsan, oo xoogga saaraysa jidka loo maro hanashada akhriska.
Halkan kala deg buugyaraha Caalamka Akhriska
Previous Ramadaan: Fursad Mar-la-arag ah oo aad Fekerrada ku Beddeli Kartid (2)
Next Shaydaan Tukada!
Osmania abdulkadir says:
Wlal aad ayaad u mahadsantahay bogga dadbadan ayuu anficidoona